Orinasa Jirama Mihevitra ny hahavelon-tena amin’ny 2020
Ambohijafy Fenoarivo Nahazo rano fisotro madio
Mbola latsaky ny 35 % ireo olona mahazo rano fisotro madio manerana ny Nosy hatreto. Voakasik’izany manokana ny kaominina ambanivohitra toy ny iainan’ireo mponina ao anatin’ny kaominina Ambohijafy Fenoarivo Atsimondrano. Mbola mahazo vahana ny fampiasana rano tsy azo antoka ka mahatonga ny aretim-pivalalana …
Fampiasana zaza tsy ampy taona Tena mbola maro eto Madagasikara
Voararan’ny lalàna tanteraka ny mampiasa zaza tsy ampy taona eto Madagasikara. Mbola maro anefa ny tranga misy momba izany eto Madagasikara na dia misy aza ny lalàna mandrara izany.
Hetsika teny Analakely Nikatona ny ankamaroan’ny mpivarotra, tsy niasa ny taksibe
Nisedra olana tanteraka ireo mpiantsena teny Analakely sy ny manodidina ny sabotsy teo. Tafiditra tao anatin’izany ireo mpaka entana avy any amin’ny faritra.
Kaominina Maereza Ambohidratrimo Hahazo lapan’ny tanàna vaovao
Afa-pahasahiranana tanteraka ny kaominina Maereza, distrikan’Ambohidratrimo. Tonga nanolotra fanampiana ho azy ireo toy ny paompin-drano fisotro madio, trano fivoahana ho an’ny hôpitaly sy ny CEG ao an-toerana, toerana fanasan-damba ho an’ny mponina mantsy ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Ambohitsirohitra sy ny fikambanana Youth Linc ny faran’ny herinandro teo.
Mananara avaratra Olona 4 maty notifirin’ny zandary
Mifamahohafo be ny vaovao voaray mikasika ilay sakoroka nitranga tao Mananara avaratra izay mbola tsy milamina hatramin’izao.
Nanao tatitra tamin’ny mpanao gazety mikasika ny zava-tontosa teo anivon’ny orinasa Jirama tamin’ny taona 2017 iny tetsy amin’ny foibeny etsy Faravohitra omaly ireo tompon’andraikitra ambony avy eo anivon’ny orinasa, notarihan’ny filohan’ny filankevi-pitantanany Hyacinthe Todimanana Befeno sy ny tale jeneraly Jaomiary Olivier.
Nohazavaina tao anatin’izany ny mikasika ny antony nampakarana 5% ny saran-jiro ho an’ireo orinasa vaventy eto amintsika sy ny fampakaran-jiron’ny isan-tokantrano ihany koa izay raha 5,5% tamin’ny taon-dasa dia lasa 8,5%. Araka ny fanazavana dia ny Jirama izay mpamokatra herinaratra sy mamatsy rano eto Madagasikara no mandany ny 40%-n’ireo vokatra avy amin’ny solika (produit pétrolier) eto amintsika. Niakatra ny vidin’ny solika aty Afrika. Ezaka be no natao matoa orinasa tsy manana afa-tsy milina efa tranainy, 30 taona raha zandriny indrindra ary 70 taona ny sasany no mbola mitohy ary tsy miova ny vokatra omena mandrak’ankehitriny, hoy hatrany ny fanazavana. Nisy fivoarany ny fitantanana ny Jirama, hoy ny fanazavana ary azo hanaporofoana izany ny nahafahana nanangana toeram-pamokarana herinaratra hatrany amin’ny 165 MW mandeha amin’ny “huile lourde”; teo ihany koa ny fanatsarana ny famokarana rano fisotro madio etsy Mandroseza sy eny Ankadivoribe, ary ny nanitsiana ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy solika mba hahazoan’ny Jirama tombony kokoa. Nisy vokany tsara tamin’ny fitantanam-bolan’ny orinasa Jirama izany, na dia tsy mahavelon-tena tsara aza ity orinasa ity.
Mbola matevina ny fatiantoka
Raha 450 miliara ariary isan-taona no fanampiana omen’ny fanjakana ny orinasa Jirama teo aloha dia lasa 210 miliara izany ankehitriny satria be ny fanamboarana tokony hatao, araka ny vinan’ny filoham-pirenena, hoy kosa ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika voakasik’ity resaka ity. Raha 4000 miliara ariary isan-taona eo no tetibolam-panjakana dia fatiantoky ny Jirama avokoa ny 1000 miliara ariary amin’io, hoy hatrany ny fanazavana. Tanjona ny hahatonga ny Jirama hahavita tena amin’ny taona 2020 raha ny resaka teny Faravohitra omaly, misy ny asa sy ezaka tsy maintsy atao mba hahatongavana amin’izany ka tafiditra ao ohatra ny ady atao amin’ireo mpangalatra herinaratra sy rano, izay tena mahatonga fatiantoka goavana ho an’ny Jirama.